Iray tamin’ireo farany matin’ny tangoliky ny fandripahana olona tany Trinidad sy Tobago ilay mpamokatra tantara an-dampihazo nalaza be · Global Voices teny Malagasy
Vono olona hoy ny polisy ny nahafaty azy
Voadika ny 06 Oktobra 2019 7:28 GMT
Pikantsarin'Itompokolahy Raymond Choo Kong niteny irery tamin'ilay tantara an-tsehatra “Norman, ianao ve io?”, nampiakarin'ny Orina The Silver Lining.
(Tangolika = spiral)
Raymond Choo-Kong, hita voatsindrona antsy tamin'ny 15 Jolay 2019, izay tale, mpilalao an-tsehatra sady mpisava làlana ho an'ny tantara an-dampihazo ao an-toerana no iray tamin'ireo olona farany matin'ny vono olona tao Trinidad sy Tobago.
Mbola manjavozavo ny antsipirihany amin'izao fotoana izao: nitatitra ny gazety iray ao an-toerana fa niseho tao aminà trano fisotroan-toaka iray an'i Choo Kong tany Arima ilay famonoana, tanàna iray any Avaratra-Atsinanan'i Trinidad, raha toa ka nilaza kosa ny iray hafa fa hita maty tao an-tranony (izay ao amin'ny rihana ambonin'ilay trano fisotroan-toaka) izy ary toa tsy nisy fidirana an-tery tao. Kely ny elanelana manasaraka ny biraon'ny polisin'i Arima amin'ny trano sy raharaham-barotr'i Choo Kong.
Fantatra tsara tamin'ny fanaovana tantara an-tsehatra ny orinasa famokaran‘i Choo Kong. Tena malaza loatra ireo tantara an-tsehatra noforoniny ka lasa anarana mahazatra ny anarany nandritra izay 40 taona niasany izay. Nanohana zazavao maro mboa eo am-panombohany ny tantara an-dampihazo teny an-toerana izy ary nohajaina fatratra toy ny mpandray anjara tamin'ny kanto.
Heverin'ireo mpampiasa tambajotra sosialy maro, izay voadona tamin'ireo vaovao, fa mahavaky fo ny namoizana lehilahy iray nampihomehy olona maro teo amin'ny fiainany tamin'ny fomba feno herisetra toy izany. Niarahaba ny hery feno famoronana sy ny fangorahan'i Choo Kong ny Ben'ny tanànan'i Arima, i Lisa Roxanne Morris-Julian, tamin'ny filazàna fa “dona nandravarava” ny fahenoana ny fahafatesany.
I Choo Kong no mpikambana nahazo fankasitrahana maro indrindra tao amin'ny vondrompiarahamonin'ny tantara an-dampihazo teo an-toerana, nahazo loka Cacique 18 — voninahitra fanomen'ny Fikambanana Nasionalin'ny Tantara An-dampihazo any Trinidad sy Tobago. Ny asa naharitra sy nangitakitaka ho an'ny mpijery teny an-toeranadia nahitàna an'i Choo Kong nanolotra andiana tantara an-dapihazo an-kira nalaza toy ny “Ilay Mpanjakalahy sy Izaho” ary niara-niasa tamin'ilay nahazo ny loka Nobel Andriamatoa Derek Walcott teo ambanin'ny fanevan'ilay Trinidad Tent Theatre taloha. Mpanoratra kalaza, fantatra tamin'ny fandraisany ireo olana tamin'izany fotoana izany ary ny famadihana azy ireo tamin'ny fomba feno hakingana ho lasa tantara an-dampihazo izay miresaka anaty fomban'ny hanihany ireo lohahevitra sarotra be i Choo Kong.
Nameno ampahany lehibe tamin'ny hafatrafatr'ireo haino aman-jery sosialy ny zava-nisy hoe mpandray anjara tamin'ny fiainana nasionaly ary nohajaina fatratra i Choo Kong, saingy milaza ny tatitra iray fa anisan'ireo olona fito maty nisy namono tao amin'ny firenena tao anatin'ireo 24 ora farany izy, izay mampitombo ahiahy vaovao amin'ny tahàn'ny heloka bevava ao amin'ny firenena.
Nilaza ny mpampiasa Facebook, Kevan Gibbs, fa:
Tokony handrava ireo mponina rehetra ao T&T ny famonoana an'i Raymond Choo Kong. Nanome ny ainy mba hampihomehy, hampitomany, hampieritrertra sy hampisaintsaina antsika izy isaky ny nandeha teo ambony sehatra na nitsangana tao aoriany. #TiaAn'iRaymongChooKongDaholoNyRehetra #MandriaAm-piadananaRaymond
Nanampy i Randall Douglas:
Very zanakalahin'ny firenena indray noho ny herisetra tsy misy ilàna azy sady tsy azo amarinina.
Efa nisy antso maro mba hihetsehana hitakiana ny rariny ho an'i Choo Kong sy ireo olona hafa maty novonoina.
14 ora izayTrinite sy Tobago